आजदेखि देशैभर भेरोसेल खोप वितरण, कुन जिल्लामा कुन उमेर समूह ? - नेपाली आवाज आजदेखि देशैभर भेरोसेल खोप वितरण, कुन जिल्लामा कुन उमेर समूह ? - नेपाली आवाज
आजदेखि देशैभर भेरोसेल खोप वितरण, कुन जिल्लामा कुन उमेर समूह ?
काठमाण्डाै – सरकारले आजदेखि देशैभर भेरोसेल खोप वितरण गर्दैछ । चीनबाट खरिद गरी ल्याएको ४० लाख डोज कोभिड-१९ विरुद्धको भेरोसेल खोप देशैभर वितरण गर्न लागिएको हो । यसका लागि ठाउँ अनुसार लक्षित समूहको वर्गीकरण गरिएको छ ।